एकै पटक २ वटा जीवन बिमा कम्पनी र एउटा हाइड्रोपावरले मागे आईपिओ निष्काशनको अनुमति – OnlinePahar
एकै पटक २ वटा जीवन बिमा कम्पनी र एउटा हाइड्रोपावरले मागे आईपिओ निष्काशनको अनुमति
२८ माघ २०७७, बुधबार १०:५७ Basanta Khanal	0 Comments	IPO
एकै पटक २ वटा जीवन बिमा कम्पनी र एउटा हाइड्रोपावरले आइपिओ निष्काशनको लागी अनुमति माग गरेको छ । धितोपत्र बोर्डमा युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र अपार हेवा खोला हाइड्रोले आईपिओ निष्काशनका लागि अनुमति माग गरेका हुन् । युनियन लाइफ र सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स जेठ ९ गते आईपिओ निष्काशनको अनुमति माग गरेका हुन् भने अपार हेवा खोला हाइड्रोले जेठ २ गते बोर्डमा आवेदन दिएको हो ।
युनियन लाइफले ६४ करोड ५० लाख बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीको बिक्रि प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ । त्यस्तै सानिमा लाइफले ६० करोड बराबरको ६० लाख कित्ता आईपिओ निष्काशन गर्न लागेको हो। कम्पनीको बिक्रि प्रबन्धक पनि प्रभु क्यापिटल रहेको छ । अपर हेवा खोलाले २० करोड बराबरको २० लाख कित्ता शेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । शेयर निष्काशनको लागि कम्पनीले एनएमबि क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक चयन गरेको छ । बोर्डबाट अनुमति पाएपछि यी कम्पनीले आईपिओ निष्काशन गर्ने छन् । Source: ajakoartha
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, आज – १ असार २०७८ मंगलवारको राशिफल पढौं
सरकार मर्निङ वाक खोल्ने, प्रहरी बाटो छेकेर रोक्ने (जनताले के गर्ने ?) →
परीक्षा नजिकिदै गर्दा विद्यार्थीहरुको लागि खुशीको खबर (के तपाईं स्मरणशक्ति बढाउन चाहानु हुन्छ ?)
२८ माघ २०७७, बुधबार १४:४८ Basanta Khanal	0
सोमबार पाँच कम्पनीको शेयरमुल्य सकरात्मक सर्किट लेभमा वृद्धि, कुनको कति ?